Izinga elisheshayo lokuqiniswa kwe-PVC kokufakwa nokufakwa kwepayipi okufana namaphrofayili wewindi, amafilimu aqinile futhi aqinile, izintambo nezintambo, ukumbozwa nokwehliswa komhlaba kusiza imakethe ukuthi ithuthuke. Izicelo ze-PVC zithatha ama-polymers wendabuko nawesikhathi esidala lokhu kufakwa kwama-PVC ngenqubo ejwayelekile kunquma ukukhula kwemakethe kwe-PVC stabilizer ngokucacile. Ukuthuthuka embonini yezokwakha emakethe ye-Asia-Pacific (APAC) kuletha inani elikhulu lamasheya kanye nemali engenayo ebhekela isisekelo semakethe esiza imakethe yokuqinisa i-PVC ukuba ichume. Intuthuko ivula umnyango wamathuba kubadlali bezimakethe, ukukhuphuka kokungena kwabadlali kunquma isilinganiso sempumelelo yemakethe ye-PVC stabilizer esikhathini esibikezelwe sika-2020 kuya ku-2027.
Imakethe yokusimamisa i-PVC izofinyelela ukulinganiselwa okulinganiselwa kuma-USD 5.32 billion ngonyaka ka-2027, kuyilapho kubhaliswa lokhu kukhula ngesilinganiso esingu-4.90% esikhathini sesibikezelo sika-2020 kuya ku-2027. yabadlali bezimakethe abahlukene ababhekise emnothweni osafufusa njenge-Asia-Pacific (i-APAC) kanye nokuthuthukisa amaphakethe ezifunda lesi sici siyisinqumo esiyinhloko semakethe ye-PVC yokusimamisa esikhathini esilindelwe sango-2020 kuya ku-2027.
Imakethe ye-PVC stabilizer iyahlaziywa nosayizi wemakethe, ulwazi lwevolumu lunikezwa uhlelo lokusebenza lwezwe, nomsebenzisi wokugcina njengoba kukhonjisiwe ngenhla.
Amazwe ahlanganiswe embikweni wezimakethe ze-PVC yi-US, Canada neMexico eNyakatho Melika, Germany, France, UK, Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe eYurophu, China, Japan, India , South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) e-Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, UAE, Israel, Egypt, South Africa, Rest of Middle East kanye ne-Afrika. (MEA) njengengxenye ye-Middle East ne-Afrika (MEA), iBrazil, i-Argentina ne-Rest of South America njengengxenye yeNingizimu Melika.
I-Asia-Pacific (i-APAC) ibusa imakethe ye-PVC stabilizer esikhathini esibikezelwe se-2020 kuya ku-2027 ngenxa yesabelo esikhulu semakethe esikhona ezimbonini zokwakha emaphaketheni aseChina naseNdiya. I-China ichaza ukukhiqizwa okuphezulu kakhulu kwemakethe ye-PVC yokuzinza ngenxa yokusungulwa kwesifunda. I-India iyavuma ukuthi iphikisana nesidingo esikhulu sohlelo lwe-PVC ngenxa yenqubekela phambili eqhubekayo emkhakheni wezolimo, izindawo zamapayipi kanye nezindawo zokuhlala ezikhulayo.
Imakethe ye-PVC stabilizer ihlukaniswe ngesisekelo sohlobo, uhlelo lokusebenza nomsebenzisi wokugcina. Ukukhula phakathi kwezigaba ezahlukahlukene kukusiza ekutholeni ulwazi oluhlobene nezici ezahlukahlukene zokukhula okulindeleke ukuthi zande kuyo yonke imakethe futhi kwakhiwe amasu ahlukene okusiza ukukhomba izindawo ezisetshenziswayo kanye nomehluko ezimakethe zakho ezihlosiwe.
Abadlali abakhulu abafakwe embikweni wemakethe we-PVC stabilizer yiBASF SE, Arkema, Baerlocher GmbH, SONGWON, Pau Tai Industrial Corp., Akzo Nobel NV, Clariant, Addivant, Valtris Specialty Chemicals, AKCROS CHEMICALS, PATCHAM (FZC)., Sun Ace Kakoh (Pte.) Ltd., Chemson Ltd phakathi kwabanye abadlali basekhaya nabasemhlabeni jikelele. Imininingwane yokwabelana ngemakethe iyatholakala emhlabeni jikelele, eNyakatho Melika, eYurophu, e-Asia-Pacific (APAC), Middle East nase-Afrika (MEA) naseNingizimu Melika ngokwehlukana. Abahlaziyi be-DBMR baqonda amandla okuncintisana futhi banikeze ukuhlaziywa okuncintisanayo komncintiswano ngamunye ngokwehlukana.
Isikhathi Iposi: Jun-19-2020